AKHRISO: RW Rooble oo shaqo joojin ku sameeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
May 24, 2022 Xuseen 9
Sido kale Ra’iisal wasaaraha dalka ayaa shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha debadda Cabdisaciid Muuse Cali .
Hoos ka Akhriso waraaqda shaqo ka joojinta Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda XFS.
Rooble shalaydan sow kii lahaa laga soo billaabo bisha 1aad qofna shaqo lagama eryi karo?! Kkk
Maxaay Guni nin gab ahi rifeeysaa!!!
Faarax Jaamac says:
Ma ninka dhuxusha fasaxaya ayaa gob ah kan xannibayana waa gun, taasi miyaanay caddaynayn wixii lagugu xaman jiray ee ahaa inaad Boolli-Qaran tihiin, oo idinka oo caga-cad Xamar timaadiin wixii laydiin dhiibo ee dadweyne aad cuntaaniin, kuna faantaaniin, qofka xun inta aadan ku sheegin xumaantiisa buu isagu ku dhahaa, waa hubaal inaad gun tihiin, Allah gacantooda waxba gelin oo tuulo joog ah kana soo cararay fakhri iyo gaajo, kalana aqoon waxooda iyo waxa loo dhiibo, kaas baa farmaajo wasiir ka dhigtay, wallaahi lafihiisa cadcad baan aqaan, xaaskiisa iyo carruurtiisa waa aqaan, gurigayga iyo kiisa waa isla joognay , carruurta England buu uga cararay, markii horena Holland, Taxi iile buu Maraykan ka ahaa, Cabdullahi Yusuf dawladdiisa Xamar yimid si wax cun u bilaabo, sidii buu u wadaa, wax uu yahay ma leh, waa naxay maalinta wasiirka laga dhigay, Farmaajo Allah meel daran kaa rid, walaalashaa baa wax walba noo sheegtay.
Daciifka CABDISACIID MUUSE in shaqada la joojiyo waa guul. Waa ninkii rabay in uu GAALKACAYO ka rido dagaal sukeeye, isaga oo lacad gaadhaysaa ilaa USD 200,000 uu ka soo qaatay XAAR FARMAAJO.
Shacabka GAALKACAYO weey ka bad-baadiin debindaayadii uu soo maleegay XAAR FARMAAJO… Reer GAALKACAYO waxeey kaashadheen ILAAH WEYNI iyo maskaxdooda, caqligooda iyo waayo-aranimadooda…
Waxaan xusid mudan in reer GAALKACAYO lacagtii la soo diray ay qaateen oo qaybsadeen oo haddana aysan dhicin wax dagaal ah…
Markii laga tegi waayo, dhowr afmishaar oo u badan reer CUMAR meela haas ka qaylqayliyeen..
WAA ILAAH MAHADIS…
Abaarso dhaqan xun bay ku bartay! Kkk
Haddii ay dhab tahay arinta markabka dhuxusha,,,, Mudane Baahane waa ku saxan yahay, waana arinka kaliya ee wanaag lugu tilmaami karo ee uu samyay ilaa iyo intii raiisal wasaaraha loo magacaabay.
IIDOOR KU WAS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Markab dhuxul ah oo ah oo Cummaan taagan oo xayiran ayuu fasaxay isagoo u xaglinaya qabiil!!!!
Ma dhuxusha ayuu dullaalaa oo beeshiisa u fududeya inay caalamka geeyaan mise Somalia ayuu u shaqeeyaa?
Waa Dhuxushii Kismaanyo dekedeeda tiilay.
Wasiir khaaraji dullaalaya dhuxusha kablalax dhoofsanayo ee Jubbaland laga shiday!!
Shaqaalaha wasaaradana beesha ayuu ka buuxshay.
Nin Soomaaliya xil dowladeed u igman oo kukacay falalka dembiyada qaran iyo xaaraanta udhigmaya ee waxyeellada dabiiciga (environmental destruction) wuxuu istaahilaa in inta laga xayuubiyo weliba xabsi dheerna lagu xukumo.
Jariimooyiinka ugu xun ayay kamid tahay in dhirta lawaxyeelleeyo – Islaamiyan iyo siyaabo kasta oo kaleba. Dalka ay wuxuushtan hoggaanka uyihiin ayaa laga rajaqabaa inuu siijiro oo lagusii noolaado, iskaba daa inuu qarannimo iyo dowladnimo taam ah saldhigto e!
Wiilashii dhulka lahaa baa u tashtey dhulkooda ..bosaso iyo tuulada garowe ha idin deeqdo .
In 2026 Waxaa Soomaaliya ka jireysa labo dawlad IRIR SAMAALE …JAMHUURIYADDA SOOMAALIYA IYO SOMALILAND